Mac သုံးချင်တယ်။ဒါပေမယ်.-- - MYSTERY ZILLION
January 2010 edited November 2010 in Mac
Mac ကိုသုံးကြည့်ချင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အကြောင်းဘာမှမသိသေးဘူး။ iMac တစ်လုံး၀ယ်ရင် ပါလာမယ့် Application တွေအကြောင်းသိချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Photo editing & Video editing software များဟာ
profectional user တွေအတွက် အဆင်ပြေရဲ့လား။ Apple website & forums တွေက ကောင်းကြောင်း ပြောကြပေမယ့်
ဒီနိုင်ငံမှာသုံးဖို့ အခက်အခဲတွေရှိနေမလား၊ သိချင်ပါတယ်ဗျာ။:2::2:
you need RS account for download software. Can't find all you need in DVD/CD Shop. Many Mac app warez in rapidshare. You can try
For video editing Final Cut Studio isagreat and you can use Adobe Master Collection CS 4. (Photoshop, Lightroom, Aftereffect, InDesign , Flash , etc)
ဘန်းကျော်မှာတော့ Mac သုံးဖို့ဆိုတာ အရမ်းကို အလှမ်းကျယ်နေသလိုဖြစ်မလားမသိဘူး။
အခက်အခဲကတော့ အများကြီးတွေ့ရမှာပဲ။ အဓိက ကတော့ software တွေလိုချင်ရင် ၀ယ်မရနိုင်တာပေါ့
Linux အတွက်ကမှ ပေါသေးတယ်။ ဖိုရမ်တွေမှာတက်မေးလဲရနိုင်တယ်။
Mac အတွက်ကတော့ ခက်လိမ့်မယ်။
no.. just need internet connection and Rapidshare account. We can use Mac. Most of the Mac software don't need to install Internet. It's better than Linux. Just drag and drop to Applicaiton for Software Installation. How easy ? Download and then open. After that just drag & drop.
yes.. of coz..
we can use Mac freely here,
as I know, some guys ( like Ko Ngwe Tun , Ko Htoo Tay Zar ) are using Mac and can support Mac Software...
currently, you guys can buy Rapidshare and Hotfile account easily in Myanmar
However, I'm not sure for connection indeed..
KMD ကပြတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာ imac ကိုကြည့်လိုက်ရတုံးက photo editing အတွက် iphoto video အတွက် imovie ဆိုလား၊ application တွေပါတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ application တွေရဲ့ အရည်အသွေးကိုရော သုံးသပ်ပေးနိုင်ပါသလားခင်ဗျား။ စေတနာထားတာကိုကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။
iPhoto , iMovie thatafree when you buy Mac OS X. they are not pro software. Just for family home made. If you don't need to make special video , just doing for family , home made.. it's OK.
Mac အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်လေးများ ရေးပေးမလားမသိဘူးဗျ
Mac Book Pro တစ်လုံးလောက်ဝယ်မလို့ ထီပေါက်ရင်
mac os ကို window ပေါ်မှာ သုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ vmware တို့ဘာတို့ တင်ပြီးသုံးလို့ရလား။ ရရင် ဘယ်လိုသုံးလည်း ပြောပြပေးပါလား။
Mac OS အစစ်ကြီးတော့သုံးလို့မရဘူး
Mac OS အစစ်က OS Setup လုပ်ရင် Setup လုပ်လုပ်ချင်း အထဲမှာပါတဲ့ Hardware တွေကိုအကုန်စစ်တယ် Apple Product မဟုတ်ရင် လက်မခံဘူး OS ကို Setup လုပ်မပေးဘူး
ခု အပြင်မှာရောင်းနေတဲ့ Mac OS အခွေတွေရှိတယ် အဲဒါတွေက အစစ်ကို crack လုပ်ထားတယ်လို့တော့ပြောတာပဲ ကြိုက်တဲ့ PC ပေါ်တင်လို့ ရတယ်တဲ့
ခုထွက်နေတဲ့ အခွေ စရင်း က iATKOS v2.0i , iATKOS v4.0i , iATKOS v5.0i , iATKOS v7.0i , iPC OSx86 Leopard 10.5.6(PPF2) , iPC OSx86 Snow Leopard
အဲဒိထဲမှာ iATKOS v4.0i နဲ့ iPC OSx86 Snow Leopard ကအဆင်ပြေပါတယ် ကျန်တာတွေက boot ကိုလုပ်လို့မရတာ
Mac OS iAtkos v4.0i ကို foxcorn board g41 chipset, Dual core 2.2 နဲ့ ဆင်ထားတဲ့ pc မှာတင်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Os နဲ့တွဲပါတဲ့ software တွေက အလုပ်လုပ်ဖို့ လုံလောက်ပါ့မလားမသိသေးပါ။ဓါတ်ပုံဖိုင်တွေ ရွှေ ့ပြောင်းတာ၊ ဆိုဒ်ဖြတ်တာလောက်တော့ရမယ်ထင်လို့ သုံးကြည့်ချင်နေပါတယ်။ထင်မြင်ချက်လေးများပေးကြပါဦး။
တကယ်ကတော့ လှတာတော့ တော်တော်လှတယ်
hardware တည်ဆောက်ပုံကောင်းတဲ့အတွက် မူရင်း hardware မှာ လုပ်သလောက်တော့ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဥပမာ။။ Power Point မှာ အချို့ text effect တွေက Windows မှာ ထစ်နေတတ်ပေမယ့် Mac OSX မှာတော့ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါက hardware ကြောင့်လည်း OS ကြောင့်လည်းဆိုတာ တထစ်ချမပြောနိုင်ပေမယ့် Mac OS ကတော့ Mac Hardware design အတွက် တည်ဆောက်ထားတာပါ။
ဒီမှာဘဲမေးလိုက်တော့မယ် Macbook တလုံးလောက်လိုချင်နေတာကြာဘီ။ ကိုစေတန်ပြောသလိုဘဲ Mac OS နဲ့ ပန်းသီး hardware နဲ့မှကိုက်မယ်ဆိုတော့..။အနိမ့်ဆုံး Mac book က ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ။လိုချင်တာက တော့အသစ်ပေါ့ ပိုက်ဆံစုတာ မပြည့်နိုင်ဘူးကို ဖြစ်နေတာ တကယ်လို့ good second hand ရောင်းမယ့်လူရှိလဲပြောကြ ပါ။
အနိမ့်ဆုံးက 10 ဝန်းကျင်ပဲ
စက်ကြီးကတော့ 20 ကျော်တယ်ပြောတယ်
အရင်ဆုုံး MacMini ၀ယ်ဖိုု့ အကြံပေးချင်ပါတယ်.. it's just $ 600
နောက်တော့ အရမ်း Heavy များမသုုံးရင် MacBook က အဆင်ပြေနိုုင်ပါတယ်..
MacBook Pro ၀ယ်မည်ဆိုုလျှင်တော့ ၁၅ လက်မကိုုသာ ၀ယ်စေချင်ပါတယ်
စျေးကတော့ $2000 လောက်နီးနီးကျသွားပါလိမ့်မယ်..
၁၃ လက်မ က $ 1400 လောက်ကျပါတယ်..
MacBook များရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားချက်များကိုု အောက်မှာ ကြည့်နိုုင်ပါတယ်
မ၀ယ်သင့်ဆုုံးက MacBook Air ပါ .. =D
mac book pro 13" ကဘာဖြစ်လို့လဲဗျ
ကျွန်တော်က အဲဒါဈေးနည်းလို့ ဝယ်မလို့စုနေတာ
15" ကျတော့ ဈေးနည်းနည်းမြောက်တယ် တော်တော်ကြီးစုရမှာ
Mac တွေ၀ယ်ရင် အမေရိကမှာ၀ယ်မှ အကောင်းဆုံး Class A,B တို့ကိုရနိုင်တယ်လို့ Mac Pro နဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူတယောက်က ပြောဘူးတယ်။ အာရှစျေးကွက်မှာတော့ Class C ပဲရနိုင်တယ်တဲ့။ ဟုတ်ရဲ့လား သိချင်လို့ ကိုစေတန်ရေ။
November 2010 edited November 2010 Administrators
apple product တွေ ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး quality တစ်ခုတည်းနဲ့ စျေးတစ်ခုတည်းပါပဲ။ အခြား brand တွေကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Quality တူချင်တူမယ်။ ဈေးတော့ မတူဘူးဗျ။ အထူးသဖြင့် exchange rate နဲ့ အမြဲခံရတယ်။ ဥပမာ apple TV ဆိုရင် US မှာ $99 ပေးရပေမယ့် UK မှာ £99 ပေးရတယ်။ ၉၉ ချင်းတူပေမယ့် ယူနစ်ကွာသွားတယ်။ ဆိုတော့ စင်ကာပူနဲ့ မလေးနဲ့ ယှဉ်ရင် မလေးမှာဝယ်တာ ပိုသက်သာမယ်ထင်တယ်။
LOL!!! စျေးက apple က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စျေးပဲ... နောက်ပြီး စကာင်္ပူက GST + ဆိုတော့ မူရင်းစျေးထက်များတယ်.. အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း မူရင်းစျေး + GST ဆိုတော့ နည်းနည်းကွာတယ်..
Goods and Services Tax ကို ပြောတာပါ။ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကျတော့ VAT (value added tax) ဆိုပြီး သုံးပါတယ်။ ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခပေါ့။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဝယ်ယူတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း (SG မှာဆို 7% လို့ ဝီကီမှာ ရေးထားတယ်)ကို ဝယ်တဲ့သူက အပိုဆောင်းပေးရပါတယ်။ GST က ဈေးရောင်းဈေးဝယ် နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ တခြားဥပမာဆိုရင် ရန်ကုန်က စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ GST ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းတွေကစပြီး ကောက်လာတာ တွေ့ရမှာပါ။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ဆိုင်ကလည်း အစိုးရဆီကို ပြန်ပြီး အခွန်ဆောင်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် GST ထည့်ပေါင်းရတာပါ။ GST မပါဘဲ ရောင်းတဲ့နေရာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လေဆိပ်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ duty free shop ဆိုင်တွေမှာပါ။
နေိုင်ငံခြားကနေ ပြည်တွင်းကို ပစ္စည်းသွင်းချင်ရင် အခွန်ဆောင်ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မြင်သာတဲ့ ဥပမာကတော့ ကားတွေပေါ့။ အပြင်မှာ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ လောက်ကားက အတွင်းရောက်တော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀၀ လောက် ဖြစ်သွားရော။ GST ဘယ်လောက်ကောက်တယ်ဆိုတာတော့ တွက်ကြည့်ပေါ့နော။ နိုင်ငံသားကောင်းပီသချင်ရင် ကားဝယ်စီးပါ။
ဒါဖြင့် ဝယ်တဲ့သူက အပေးဘက်ကချည်းပဲလို့ပြောရင်လည်း နိုင်ငံတိုင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ Tax Refund Scheme တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေဝယ်တာမျိုးဆိုရင် တစ်နှစ်တစ်ခါ ပြန်ပြီး claim (ပြန်အမ်းငွေ တောင်းခံ)လို့ ရပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် apple ကနေ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေ $2,000 ဖိုး ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ၁၀၀၀ လောက် ပြန်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပါ။ မှားတာရှိရင် ထောက်ပြပေးပါ။ သေချာနားလည်တဲ့သူ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေပေးစေလိုပါတယ်။ ဆက်စပ်သိသင့်တာတွေကတော့ အလုပ်လုပ်ရင် ပေးရတဲ့ tax တွေသိထားရင်လည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။
www.warez-bb.org တွင် Macအတွက်(Windowsအတွက်ရော) ဆော့ဖဝဲများစွာရှိသည်။ Accountတော့ လိုသည်။ စေတန်ပြောတ​ဲ့ mac-bb.orgက ဖွင့်လို့လဲ မရပါလား။ အခြား Mac Appတွေ ရှိတဲ့ သူခိုးဆိုက်လေးများ သိရင်လဲ မစကြပါဦး။
Euro, USတို့မှာ အဟောင်းပစ္စည်းဆိုရင် GST ဆောင်စရာမလို။ ရှောရှောရှူရှူသယ်လို့ရတယ်။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့ ဘာတို့ ယူအက်တို့၊ ယူရိုတို့မှာ ရှိရင် အဟောင်းလှမ်းမှာလိုက်ပါ။ Iphone 3Gဆို ဒေါ်လာတစ်ရာပဲ ရှိတယ်။ MacBookPro
ဒီလောက်စနစ်ကို ဒေါ်လာ ၆၀၀ပဲရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းရင် ပစ္စည်းကောင်းပိုရနိုင်တယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေလဲ အတော်အိုန နေတတ်တယ်။ ရွေးဝယ်ခိုင်းပေါ့။
@masoeyein Syardaw pha yar ... buying refurnished items from apple store isabetter choice I believe ..
Yes I know what you say. It is more better for the poor who are interesting in apple technology. Thank you brother for your suggestion.